घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » यदि यो तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्! » वाह! बीएमडब्ल्यू 8 श्रृंखला ग्रान कूप विशेष संस्करण
लक्जरी बीएमडब्ल्यू 8 श्रृंखला ग्रान कूप फेब्रुअरी 2022 मा फ्रिज लस एन्जलस मा यसको विश्व प्रीमियर पछि एक सीमित कलेक्टर संस्करण मा बिक्री को लागी हुनेछ। 2010 मा, अमेरिकी कलाकार पहिले नै एक बीएमडब्ल्यू एम3जीटी2आर्ट कार बनाईएको छ जो ले को 24 घण्टा मा प्रदर्शन गरीयो। मानिसको दौड।
जेफ कोन्स, ओलिभर जिप्से, BMW AG को बोर्ड को अध्यक्ष संगै, आज घोषणा गरे कि कलाकार M850i ​​xDrive ग्रान कूप को एक विशेष संस्करण सिर्जना गर्नेछन्।
लक्जरी 8 श्रृंखला ग्रान कूप फेब्रुअरी 2022 मा फ्रिज लस एन्जलस मा यसको विश्व प्रीमियर पछि एक सीमित कलेक्टर को संस्करण मा बिक्री को लागी हुनेछ। 2010 मा, अमेरिकी कलाकार पहिले नै एक बीएमडब्ल्यू M3 GT2 आर्ट कार को निर्माण गरीयो जो ले मन्स को 24 घण्टा मा प्रदर्शन गरीयो। दौड।
जेफ कोन्स: "म साँच्चै रोमाञ्चित छु र बीएमडब्ल्यू संग फेरि काम गर्ने अवसर र एक विशेष संस्करण कार बनाउन को लागी सम्मानित छु।"
हाल कारहरु BMW समूह संयंत्र Dingolfing, Bavaria मा गोप्य मा उत्पादन गरीरहेको छ। IAA मोबिलिटी २०२१ को उद्घाटन हुनु भन्दा केहि दिन पहिले पिनाकोथेक डेर मोडर्ने मा एक विशेष कार्यक्रम को दौरान, पहिलो झलक र क्लोज-अप विवरण प्रकट भयो।
The 8 X JEFF KOONS सटीक, परिष्करण र शिल्प कौशल को एक अवतार हो, एक बहु परत रंग २285५ घण्टा प्रत्येक कार मा लागू गर्न को लागी। अर्थपूर्ण र हड़ताली डिजाइन ग्यारह बिभिन्न बाहिरी रंगहरु नीलो देखि चाँदी साथै पहेँलो देखि कालो सम्म को संयोजन गर्दछ। प्रत्येक हप्ता मात्र दुई कार उत्पादन गरिनेछ। बहु रंगीन भित्री उच्च-अन्त सामाग्री, ठीक छाला र एक संस्करण ब्याजिंग र कलाकार को उत्कीर्ण हस्ताक्षर संग एक cupholder ढक्कन को शामिल छ। सीटहरु कम्पनी को उच्च प्रदर्शन इकाई बीएमडब्ल्यू एम को हड़ताली रातो र नीलो रंगहरु बाट बनेको छ। डिजाइन पप कला को दुबै तत्वहरु संगै ज्यामितीय ढाँचा 8 श्रृंखला ग्रान कूप को जटिल रूपरेखा र आकार को श्रद्धांजलि सामेल छन्।
बीएमडब्ल्यू समूह कर्पोरेट र सरकारी मामिलाहरु